Ny sary namboarina niaraka tamin'ny sombin-kaody niarahan'i Jolita Vaitkut | Famoronana an-tserasera
Nataoko a Mombamomba ny mpanoratra ho an'ny akordionista Martin Levickis miaraka amin'ny fifanarahana tena izy sy ny anjarany. Ny fifanarahana dia misy a sekely roa alina ao anatiny, ka nanapa-kevitra ny hamorona ny sary miaraka amin'ireo faritra ireo izy. Fa izany no raisinay fanekempihavanana taloha roa ary fomba nahafinaritra namoaka zava-maneno taloha ho toy ny tetikasa kanto io. Adiny efatra teo ho eo no nanatanterahako azy.
Rehefa namoaka ny asako tao amin'ny Facebook aho dia nanontany ny namako fa te-hahazo sombin-tsarimihetsika piano ho an'ny tetikasako vaovao, ary nomen'ny sasany tamiko izany. Jolita Vaitkut Izany dia mpamorona sy mpanakanto, izay mamorona sy mampiditra hevitra miavaka. Malaza amin'ny famoronana kanto amin'ny fampiasana sakafo na fitaovana hafa izy, miaraka amin'ny pensilihazo, ravin-taratasy ary karazana hafa.
Efa nieritreritra ny ho mpanakanto fanta-daza amin'ny haino aman-jery ve ianao ary afaka hanana fiatraikany lehibe?.
Vehivavy 20 taona aho, mpanakanto avy any Litoania. Nanao asa aho tamin'ny fampiasana sôkôla, zava-manitra isan-karazany, saosy voatabia, fromazy, vokatra ary fitaovana hafa.
Izaho dia nanao sary niaraka tamin'i Martynas Levickis, mpiangaly mozika, niaraka tamin'ny tena akordion sy ampahany. Ny akordey dia misy sombiny roa alina eo ho eo ao aminy, ka nanapa-kevitra ny hamorona ny sary miaraka amin'ireo sombin-javatra ireo izy. Maka ampahany amin'ny fifanarahana taloha roa araka izay azo atao izahay. Tsy nino mihitsy aho fa hisy fiantraikany be amin'ny sangan'asa izany. Araka ny tsipiriany nataon'i Jolita Vaitkut.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sary namboarina tamin'ny sangan'asa akoratan'i Jolita Vaitkut